ကမ္ဘာ့စမတ်မြို့ကြီးများညီလာခံ 2018 စတင် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်စမတ်မြို့ကြီးများ World Congress တွင် 2018 Start
18 / 04 / 2018 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, တူရကီ
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့ရှည်လျားသုံးရက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal, သိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Faruk concise ဟောင်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ် Jose Luis Rodriguez ၏ (ကမ္ဘာ့ဖလားမြို့ကြီးများကွန်ဂရက်အစ္စတန်ဘူလ် 2018) ဖွင့်ပွဲအတွက် "ကမ္ဘာ့စမတ်မြို့ကြီးများကွန်ဂရက် 2018" တည်ခင်းဧည် Zapatero နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin Vasip အတူတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Yenikapi နှင့် Eurasian ဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာ Center ကကျနော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့အစ္စတန်ဘူလ် '' စမတ်မြို့ကြီးများအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ဖို့ ", အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal ကျင်းပတဲ့ညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ Speaking ။ ကျနော်တို့ကိုယ်စားထုတ်ဖော်ပြသပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာစမတ်မြို့ရူပါရုံကို, မဟာဗျူဟာနှင့်လမ်းပြမြေပုံ။ Vision ၏စာရွက်စာတမ်းကျွန်တော်တို့ကို၌ဤအသိဉာဏ်မြို့ပြမြန်နှုန်း add ပါလိမ့်မယ်ကိုပြင်ဆင်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုမိုထိရောက်သောအဆိုပါ Gerekiyor- ပြုလုပ်ခြင်း-Şehir
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတယဉ်စကားပြောဆိုမှုမှ 12 ကုမ္ပဏီများညီလာခံ၏အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်ထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်ကြောင်းနည်းပညာ, ပြားများနှင့်လုပ်လိမ့်မည်သောအချက်အလက်များ၏တင်ပြချက်ကနေ 120 100 မြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများသည်ဆက်လက်: "21 ။ ရာစု, ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးအစီအစဉ် '' စမတ်မြို့ကြီးများ '' ပုံစံများကိုတစ်ဦး။ တစ်စမတ်မြို့ဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုတိုးမြှင့်တိုတောင်းပိုမိုအသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ, စွမ်းအင်ဖြေရှင်းနည်းများ, အဆောက်အဦးများ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, ။ အနီးအနားမှာကအနာဂတ်အတွက်ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏မြို့ကြီးများ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာနေထိုင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ထပ်မံတိုးပွားလာနေသည်။ လျင်မြန်သောမြို့ပြ; အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ကြီးမားဖိအားကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များ, ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများပြီးသားအသိဉာဏ်စီမံကိန်းလှည့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကမ္ဘာ့အဓိကမြို့ကြီးများမတိုင်မီဒီအလူဦးရေ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုထက်မြက်စေသင့်ပါတယ်။ "
နိုင်ငံသားများ 24 နာရီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူနေ့အဘို့ပြုလုပ်တိုးချဲ့နေ့ရက်တိုင်း၏အတိုင်းအတာအောက်မှာအသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ, စည်ပင်သာယာန်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဒေသခံအစိုးရများအဖြစ်မြို့ပြများယူဆောင်ပြဿနာတွေ, သူတို့ကယဉ်အားလုံးဒေသများရှိအပြန်အလှန်အတွက်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကြောင်းရှင်းပြ "လို့လက်ပြဿနာတစ်ခုအစာရှောင်ခြင်းဖြေရှင်းနည်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်မြို့စံကိုထုတ်လုပ် ကျနော်တို့မြှင့်ရပါမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ Co-ရာ၌ခန့်ထွက်သယ်ဆောင်ရပေမည်။ မြို့ကြီးများပို livable အသိဉာဏ်စနစ်များကိုဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၌ကြီးသောအရေးပါမှုသည်ဖြစ်စေမည်။ စင်ကြယ်အစိမ်း, ကျနော်တို့စီစဉ်ထားမြို့ကြီးများဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်; ကျနော်တို့ဖန်တီးပါတယ်အစ္စတန်ဘူလ် '' စမတ်မြို့ကြီးများအညွှန်းကိန်း၏မြို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ရန်အစ္စတန်ဘူလ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်စားထုတ်ဖော်ပြသပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာစမတ်မြို့ရူပါရုံကို, မဟာဗျူဟာနှင့်လမ်းပြမြေပုံ။ Vision ၏စာရွက်စာတမ်းကျွန်တော်တို့ကို၌ဤအသိဉာဏ်မြို့ပြမြန်နှုန်း add ပါလိမ့်မယ်ကိုပြင်ဆင်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
မိုဘိုင်း Applications ကို၏ဧရာမတော်လှန်ရေးတွင်
"ကျနော်တို့နေတဲ့ကာလကမိုဘိုင်းပလီကေးရှင်းယခု:" စိတ်ကူးများကိုလျင်မြန်စွာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြသောအခါဘဝကပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ် "ဟုသမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal ပြောသည်။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအလေ့အကျင့်၏စမတ်တဦးတည်းမြို့ပြယာဉ်ကြောကိုယ်စားဖြစ်ခဲ့သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာ '' မိုဘိုင်းယာဉ်အသွားအလာ '' ကိုအသုံးပြုဖို့အဘယ်မှာရှိအစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကြီးအလိုအပ်ချက် replied နှင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ စမတ်မြို့ကြီးများကျယ်ပြန့်သည့်တက္ကစီများတွင်အသုံးပြုကြသည်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများမြူနီစီပယ်ကတီထွင်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့မိုဘိုင်း application များတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးအခြားရွေးချယ်စရာဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်; ငါ-တက္ကစီတစ်ဦးတက္ကစီဒါကြောင့်ကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်၏နာမကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များမှဤလျှောက်လွှာအပါအဝင်ခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အနာဂတ်၏ရူပါရုံကိုသယ်ဆောင်ရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှိသည်။ ကျနော်တို့အများကြီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များနှင့်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ "
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အသိဉာဏ်အသွားအလာအချက်ပြ application တစ်ခု IMM ယဉ်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကြောင်းပြန်ပြောပြ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 100 အရေးကြီးသောလမ်းဆုံဒီစနစ်၏အသုံးပြုမှုကိုမှတ်ချက်ချသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal said: "ဒီစနစ်ကမော်တော်ယာဉ်မှဆွေမျိုး signal ကိုကြာချိန်နှင့်ပြင်းထန်မှု၏အကူးအပြောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Istanbullites, အချိန်နှင့်လောင်စာဆီကယ်တင်တော်မူ၏။ စမတ်မြို့ပြမြို့တော်ကိုဖိုင်ဘာကွန်ယက်ကိုတပ်ဆင်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည်အဆိုပါဖိုက်ဘာကွန်ရက်ကရောက်ရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းကနေအများကြီးရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်မြို့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်များ၏အားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံရန်, ချက်အရအနာဂတ်တွင်လိုအပ်။ မြို့ကြီးများဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏စင်တာများဖြစ်ကြသည်။ တန်ဖိုးရှိရှိတစ်မြှို့နယ်အဖြစ်ကျနော်တို့ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုထောကျပံ့။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန, ငါတို့တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်စီးပွားရေးလောက၌ရှိကြ၏။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအတှေ့အကွုံ (အသကျရှငျဓာတ်ခွဲခန်း) အလုပ်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသူတို့ကိုထောက်ခံမှုပေး။ သင်သိကျနော်တို့ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများနှင့်တီထွင်မှုနှင့်အတူရောက်ရှိပါပြီချမ်းသာကြွယ်၏ပစ္စုပ္ပန်အဆင့်အထိအတိတ်ကာလရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်းသစ်စိတ်ကူးများ၏အနာဂတ်ကျနော်တို့နည်းပညာသစ်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးကြားဝင်ပုံဖော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကပိုကောင်းတဲ့အနာဂတျအတှကျထိုသို့ပြုမှရှိသည်။ ကျနော်တို့ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရန်ရှိသည်။ "
နည်းပညာတက္ကသိုလ်အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခိုင်ခံ့ Var- လိုအပ်တာလဲ
IMM နေ့တိုင်းအချက်အလက်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်, တစ်ဦးအားကြီးသောနည်းပညာအခြေခံအဆောက်အဦများ၏ထို့ကြောင့်အရေးပါမှု, အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်သောဒေတာအကြီးဆုံး processing နေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေခြင်းငှါပထမနှင့်ဗွေဆော်တစ်ခုခုပိုပြီးအသိဉာဏ်စနစ်များနှင့်အတူသမ္မတ Uysal "မြို့ကြီးများကိုအလေးပေးသော။ အနာဂတ်မှာများ၏မြို့ကြီးများအတွက်အတုထောက်လှမ်းရေးဆက်ဆက်စီးပွားရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များပိုမိုအာကာသယူပါ။ အဆိုပါအိမ်ခြေနှိုးဆော်သံစနစ်, ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်စွန့်စားမှုဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တစ်ဦးကာလအတွင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုအလိုအလျောက်ပယ်ဖြတ်လသည်အဘယ်မှာရှိချက်ချင်းမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်ဆိုဘေးအန္တရာယ်အလုပ်လုပ်သည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စွန့်ပစ်ရာမှရရှိခဲ့သည့်စွမ်းအင်များက lit နေကြသည်။ ကျနော်တို့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတိုင်းဤစနစ်များရှိသည်။ သင်စမတ်မြို့နည်းပညာများထည့်သွင်းထားသကဲ့သို့မြို့ကြီးများမှာပိုဆားကစ်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်စီးပွားရေးကြွယ်ဝချမ်းသာတိုးပွါးလိမ့်မည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒေသခံအစိုးရများ၏စမတ်မြို့ပြကိုယ်စားစေမည်ကြောင်းကောင်းစွာသိအလုပ်တွေအများကြီးရှိသည်, "ဟုပြောသည်။
အတွင်းရေးမှူး Extract: "မတ်မြို့ခေတ်မီလျှောက်လွှာမြို့တော်စည်ပင်ကသစ်ကိုဦးတည်ရာ"
သိပ္ပံ၏အဖွင့်မှာ Speaking "ကမ္ဘာ့ဖလားကို Smart မြို့ကြီးများကွန်ဂရက် 2018" စည်ပင်သာယာမှသာသန့်ရှင်းရေး "ဝေးနောက်ကျကြောင်းဖော်ပြထားသည်စက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Faruk တိကျခြင်းဂန္မြို့ပြစီမံခန့်ခွဲမှုအယူအဆ, ရေ, ဝေးထိုကဲ့သို့သောလမ်းများအဖြစ်အခြေခံလူထုန်ဆောင်မှုများ၏အဓိပ္ပါယ်များ ကျော်လွန်. သယ်ဆောင်။ အသစ်လမ်းကြောင်းစမတ်မြို့ applications များခေတ်သစ်မြို့တော်စည်ပင်ကနေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကို xnumx ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးဝင်ငွေအစ္စတန်ဘူလ်ရာခိုင်နှုန်းကို welded ဖြစ်ပါတယ်:" အစ္စတန်ဘူလ် 130 တိုင်းပြည်ထက်ပိုကြီးတဲ့စီးပွားရေးကိုနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာရှိပါတယ် "ဟုသူကအောက်ပါအတိုင်းဝန်ကြီးတိကျခြင်းသူ၏မိန့်ခွန်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ချိန်တည်း, အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများနှင့်ဆွဲငင်အား၏ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်လာဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့အဖြစ်, အစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာ၏ငလျင်ဗဟိုချက်မှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံစင်တာလက်စွပ်အရေးကြီးဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နည်းပညာ, R & D နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်, ကမ္ဘာ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤအရေးကြီးသောညီလာခံအစ္စတန်ဘူလ်နေရာယူပြီးသည်ငါတို့မွို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက်အလားအလာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်သိသာသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေတဲ့မြို့တို့တွင်ယနေ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအတွက်တည်ရှိသည်။ အားကစားကနေအနုပညာဖို့တူရကီရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်ကျောင်းသား, ကုန်သွယ်ရေးမှယဉ်ကျေးမှုကိုတက်, များစွာသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှအိမ်ပြန်တိုင်းဧရိယာထဲမှာလည်ပတ်။ အစ္စတန်ဘူလ်, ဒီဧရိယာထဲမှာကမ္ဘာကြီးမြို့တို့တွင်အဆင်းလှသော, 56 hosting အားဖြင့်နီးကပ်တစ်နှစ်လျှင်နိုင်ငံတကာကွန်ဂရက် 27, 130 ။ ဒါဟာအဆင့်။ ဤသည်ကိုအခှငျ့အာဏာငါတို့မြို့, ရန်ကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်၏။ "
ဝန်ကြီးများ၏ကောက်နုတ်ချက်, အစ္စတန်ဘူလ်ကမ္ဘာ့ဝိုင်းသည်နှင့်ထိုက်တန်တဲ့ထက်ပိုရှင်းပြ, မြို့တော်၏ခေါင်းစဉ်ကို congresses သူမြို့ကြီးများ၏ဤခေတ်ထဲမှာမရှိတော့ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲသူကပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တူရကီ, ဘယ်မှာမြို့ကြီးများနှင့်ခရိုင်၏လူဦးရေ၏ 93 ရာခိုင်နှုန်းကတစ်တိုင်းပြည်များကဲ့သို့က "Smart မြို့စီမံခန့်ခွဲမှု" တိကျခြင်းညွှန်ပြနေသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်, အစ္စတန်ဘူလ်မှရည်ညွှန်းနေချိန်တွင်သူသည်ဤဇယားကိုပိုပြီးသိသာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
-Şehir၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စမတ် Gerekiyor- ဖြစ်မီက
ဝန်ကြီးများ၏ကောက်နုတ်ချက်, မြို့ကြီးများ, စွမ်းအင်, အခြေခံအဆောက်အဦများ digital မတိုင်မီအထိပညာရှိသရန်လိုအပ်ကြောင်းဆိုသည်ကား, ကအသွားအလာကိုစီမံခန့်ခွဲ၏လုံခြုံရေးနှင့်တစ်ဦးအခြို့သောထောက်လှမ်းရေးနှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူသက်ဆိုင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒေတာများကိုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ တူရကီရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းဤသူအပေါင်းတို့သည်အကြောင်းရင်းများ, သူတို့မြို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းစုံစုံဖော်ပြနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်အကဲဖြတ်, အောက်ပါအတိုင်းစကားများဆက်လက်: "မတ်မြို့ကြီးများ, ငါတို့တိုင်းပြည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလမ်းပြမြေပုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဒီကြည့်ပါ။ သိပ္ပံစင်တာအခြေစိုက် Technologies က, အဆင့်မြင့်စက်မှုနိုင်ငံများမတ်မြို့ applications များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တူရကီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးလီဗာအဖြစ်စဉ်းစားပါ။ တူရကီတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရှေးအစဉ်အလာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများအားလုံး; ငါတို့သမိုင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်အလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာလက်ခံရရှိသည်။ တူရကီရဲ့သငျသညျသမိုငျး၏အနှစ်မြို့တော်ရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသွားနှငျ့သငျယဉ်ကျေးမှုခြေရာတွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်အဘယ်အရာကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများ built နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အလင်းပြန်လည်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်တွေဟာပါပြီ။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာနေချိန်မှာကျနော်တို့ကိုလည်းခေတ်မီ၏အယူအဆမှ၎င်း၏လက်မောင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင် 81 921 စမတ်မြို့ applications များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများကိုမှန်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin: "တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်များ၏ RECENT အလေးချိန် SMART City အယူအဆ"
တလက်တမြို့ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်, မြို့မှာရှိတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vasip စွန်ငှက်စကားပြောထဲမှာ "ကမ္ဘာ့စမတ်မြို့ကြီးများကွန်ဂရက် 2018" ဖွင့်ပွဲနှင့်အပိုထိထိရောက်ရောက်န်ဆောင်မှု၏အခြားဘက်ခြမ်းမှပေးအပ်ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးအသိပညာနှင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေး, အရည်အသွေး, သူသည်သတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့ကြီးသောအခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်ဆိုပါတယ် ။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin, အသိဉာဏ်မြို့ကြီးများ "၏မကြာသေးမီအယူအဆများ၏အလေးချိန်ကိုတိုးမြှင့်ပြောနေကြပါတယ်စမတ်မြို့ကြီးများဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ပိုမိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အခြားမြို့ကြီးများရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှလာရန်စတင်ခဲ့ပါပြီတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသောအယူအဆဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အရည်အသွေးနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတိုးတက်အောင်ဘို့ကြီးသောအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းသောမြို့၏အခြားဘက်ခြမ်းမှပေးအပ် smart မြို့ကြီးများ, အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် optimization အပေါ်အခြေခံပြီးအသိပညာနှင့်နည်းပညာများ၏တဦးတည်းလက်ပေါ်မြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စမတ်မြို့ကြီးများ၏လယ်ပြင်တွင်, တူရကီကအများအပြား applications များ Sahin ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပြသပါလိမ့်မည်ဆိုသည်ကား, said:
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်ရှုထောင့်, အကောင့်သို့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမျက်မှောက်ဆုံးရှုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌သူတို့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအခြားမြို့များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်များ၏အတွေ့အကြုံကိုယူပြီး။ ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူထုအဖွဲ့အစည်းများမဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးရန်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာတစ်ခုမှာ data တွေကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ စမတ်မြို့ကြီးများကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသဘောတရားများကိုခေါ်၏ဗဟိုမှာအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကထုတ်လုပ်ပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်ဖြေရှင်းချက်ထိုဝန်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုဒေတာအားလုံးပါတီများ၏ဧရိယာ၌တည်ရှိသည်ထုတ်လုပ်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအရေးပါမှုတိုးပွားလာ၏နောက်ထပ်အယူအဆ, ဆိုက်ဘာစပေ့ထဲမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးတို့အတွက်အထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်။ ယနေ့ခေတ်သင်တို့ရှိသမျှန်ဆောင်မှုများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, အင်တာနက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများဒေတာလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသို့ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်, ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများရေရှည်တည်တံ့အဖြစ်ဘဝများစွာကိုရှုထောင့်မှာရှိတဲ့အရေးပါမှုရရှိမှု၏။ "
အဆိုပါမိန့်ခွန်းပြီးနောက်, protocol ကိုစင်မြင့် "စမတ်မြို့ကြီးများ World Congress တွင် 2018" ၏အဖွဲ့ဝင်အတူတကွဖဲကြိုးဖြတ်လေ၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal နှင့်အခြား protocol ကိုအဖွဲ့ဝင်ထို့နောက် IETT လုပ်ခဲ့တယ်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်လျှပ်စစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များ၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့။ ပြပွဲအာကာသလည်း protocol ကိုအဖွဲ့ဝင်အတူတကွကိုယ်ရံတော်ရပ်အဆိုပါ browsing အတွက်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များရရှိခဲ့သည်။
"စမတ်မြို့ကြီးများ World Congress တွင် 2018" အီး (ကမ္ဘာ့ဖလားမြို့ကြီးများအစ္စတန်ဘူလ်ကွန်ဂရက် 2018) ခွု
Yenikapıနယ်ပယ် Eurasian ဝိဇ္ဇာ Center ကဖျော်ဖြေနှင့်ကွန်ဂရက်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များနှင့် 12 panel ကိုကျင်းပပါလိမ့်မည်။
100 ဖြစ်ရပ်နှင့်နီးစပ်သူအဆိုပါဧရိယာတွင်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ပညာရှင်များ၏မှုတွင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်မြို့ကြီးများတစ်လျှောက်လုံးသုံးရက်စပီအမည်များများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပလိမ့်မည်, စမတ်မြို့ကြီးများ၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
"တီထွင်ဆန်းသစ်စီးတီးနည်းပညာ", "စမတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်နည်းပညာအတွက်မြို့ကြီးများ", "နောက်လမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏အင်တာနက်ပေါ်တွင်အတွက်စမတ်မြို့ကြီးများ", "စမတ်မြို့ကြီးများမဟာဗျူဟာ", "မြို့၌ရေရှည်တည်တံ့သောမြို့ကြီးများပေါ်လစီ", ", Mega ရေရှည်တည်တံ့သောပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ" နှင့် "စမတ်စီးတီးဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးမှာ" ယင်းညီလာခံတက်ရောက်ခြင်းအများအပြားအိုးအိမ် panel ကိုအမည်ရကုမ္ပဏီများနည်းပညာအသစ်ထုတ်ကုန်များ၏နိဒါန်းဖျော်ဖြေဖို့စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။
xnumx'üncü "စမတ်မြို့ကြီးများ World Congress တွင် 3" 2018 ဧပြီလအဆုံးသတ်မည်အစ္စတန်ဘူလ်၌ဤနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
10 ။ High-Speed ​​ကိုမီးရထားပေါ်တွင် World Congress တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစတင်
10 ။ High-Speed ​​ကိုမီးရထားပေါ်တွင် UIC World Congress တွင်စတင်
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: 2013 PTC World Congress တွင် - အမေရိကန်
Intelligent မြို့ကြီးများ၏ World Congress တွင်
Zapatero: "ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦး Capital ကိုရှေးခယျြဖို့လုံးဝလိုအပ်လာခဲ့သည်ဆိုပါကအစ္စတန်ဘူလ်ဖြစ်ပျက်"
မောင်းသူမဲ့နှင့် IMM လျှပ်စစ် Tool ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော